အောင်သတင်း ဝဘ်ဆိုက်သည် နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် သတင်းများကို ဖော်ပြပေးနေသော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်များ အထူးသတင်းများကိုလည်း အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြပေးနေပါသည်။ အောင်သတင်း
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပထမဆုံးအရာရှိအဖြစ် စိုင်းဝမ် အား ခန့်အပ်
စိုင်းဝမ်အားမီဒီယာများမှ မေးမြန်းစဉ် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရန်ကုန်
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် (Microsoft) အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပထမဆုံးအရာရှိအဖြစ် စိုင်းဝမ် (Sy Wann) အား ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် နှင့်အတူ နည်းပညာပြောင်းလဲမှု အခမ်းအနားတွင် Microsoft Asia Pacific ၏ ဈေးကွက်သစ်ဆိုင်ရာ အထွေထွေမန်နေဂျာ Michelle Simmons (မစ်ရှယ်ဆိုင်မွန်) က ပြာကြားခဲ့သည်။
အာရှပစိဖိတ်ဒေသရှိ ဈေးကွက်အား ဆက်လက်ထိုးဖောက်နိုင်ရန်အတွက် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ အိုင်တီပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် စိုင်းဝမ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် နည်းပညာပြောင်းလဲမှုအားဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်း ဆိုသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကတိကဝတ်တစ်ခုအနေနဲ့ Microsoft က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမယ့် စိုင်းဝမ်ကို ခန့်အပ်လိုက်တာက မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးချဲ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိုင်းဝမ် အနေနဲ့ သူတာဝန်ယူထားရတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့နည်းပညာတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပံ့ပိုးမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ’’ ဟု မစ်ရှယ်ဆိုင်မွန် ကပြောသည်။
စိုင်းဝမ်က “ကျွန်တော်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် နဲ့ သချာၤဘာသာရပ် ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာ လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးကို အထောက်အကူပြုဖို့တွေအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ့်ဟာတွေဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ Microsoft Philanthropies တွေပါဝင်ပါတယ်’’ ဟုပြောကြားသည်။
စိုင်းဝမ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ နှင့် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ အရောင်း နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ စသည်တို့အား ပြုလုပ်ပေးသည့် Cisco လုပ်ငန်းအား တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၊ သုံးနှစ်အကြာတွင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကရှိ Travelocity နှင့် Capital One ကဲ့သို့ လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူခဲ့ကာ အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေးအား အလေးထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အောင်သတင်း Aung News
ကိုးကား - ဆင်ဟွာမြန်မာ
ဓာတ်ပုံ - ဆင်ဟွာမြန်မာ
ဒလ-ရန်ကုန်တံတား ငါးနှစ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်မည်
ချယ်ရီသင်္ဘောဖြင့် ရန်ကုန်-ဒလ ကူးသန်းသွားလာနေသော ခရီးသည်များ
စက်တင်ဘာ ၂ဝ ရန်ကုန်
လူဦးရေအားဖြင့် တစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းခန့်နေထိုင်သည့် ဒလမြို့နယ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဖြတ်သန်းဆောက်လုပ်မည့် ဒလ-ရန်ကုန်တံတားအား လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းအတွင်း အပြီးတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က စက်တင်ဘာ ၂ဝရက်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
အဆိုပါ တံတားအား ရန်ကုန်ဘက်ကမ်းမှ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ဘုန်းကြီးလမ်းနှင့် ဒလဘက်ကမ်းမှ ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းကို ဆက်သွယ်ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဝင်းခိုင်က ပြောသည်။
"၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ပြီးစီးရန် စီစဉ်ရေးဆွဲထားပါတယ်" ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဧရိယာစတုရန် ၈၇၅မိုင်ကျယ်ဝန်းပြီး လူဦးရေ တစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းခန့်နေထိုင်သည့် ဒလမြို့နယ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဆက်သွယ်မည့် ဒလ-ရန်ကုန်တံတားဆောက်လုပ်မည့် အစီအစဉ်အား ဒလမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာစိန်မြအေးက လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းမှုအပေါ် ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်က အထက်ပါအတိုင်း
လက်ရှိတွင် တံတားစီမံကိန်းစတင်နိုင်ရန် အတိုင်ပင်ခံ Consultant ကုမ္ပဏီရွေးချယ်ခြင်းအနေဖြင့် Consultant Contract Agreement စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးကို စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များအား ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ သဘောထားမှတ်ချက်ရရှိပြီးဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ပြောသည်။
အတည်ပြုချက်ရရှိပါက အတိုင်ပင်ခံ Consultant ကုမ္ပဏီနှင့် Contract Agreement ချုပ်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီမှ အသေးစိတ်ပုံစံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၈လခန့် ကြာမြင့်ကာ ကန်ထရိုက်ရွေးချယ်ခြင်းမှာလည်း ၄လခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
တည်ဆောက်ရေးကန်ထရိုက်တာ ရွေးချယ်ပြီးစီးပါက တံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြီးစီးရန် စီစဉ်ရေးဆွဲထားကြောင်း ဦးဝင်းခိုင်က လွှတ်တော်တွင် ပြောသည်။
တံတားတည်ဆောက်စဉ်ကာလအတွင်း ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် ကိုရီးယား အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီနှင့် Traffic Management ကို အသေးစိတ်တွက်ချက် စီစဉ်သွားမည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ကိုးကား - မဇ္စိုမ
ဓာတ်ပုံ - ဟောင်ဆာ(ရာမည) (မဇ္ဈိမ)
အစည်းအဝေး နောက်ကျသော ကိုယ်စားလှယ်များကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သတိပေး
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ကိုတွေ့ရစဉ်
စက်တင်ဘာ ၂၀ နေပြည်တော်
လွှတ် တော်အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန်နောက်ကျသည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သတိပေးစကားပြောကြားလိုက်သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကို နံနက် ၁ဝ နာရီတွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး နေ့လယ်စာသုံးဆောင်ရန် အစည်းအဝေးကို ရပ်နားကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ပြန်လည် စတင်မည်ဟု လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့နောက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ အစည်းအဝေးပြန်လည် စတင်ချိန်တွင် လွှတ်တော်ခန်းမအတွင်းသို့ ကိုယ်စားလှယ်အချို့ နောက် ကျဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။
ယင်းအခြေအနေအပေါ် ပြည် သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်က''လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပ နေတဲ့အချိန်မှာ လွှတ်တော်ကို လေးစားလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခုလွှတ်တော်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂ဝ၊ ၂၅ လောက် လွှတ်တော်ထဲကိုဝင်လာတာ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါဟာ လွှတ်တော်ခန်းမ၊ လွှတ်တော်အစည်း အဝေးဆိုတာကို လေးလေးနက်နက် သဘောပေါက်ပါ''ဟု နောက်ကျသည့် ကိုယ်စား လှယ်များကိုသတိ ပေး ပြောကြားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မေး ခွန်းနှစ်ခုနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြင်ဆင်ချက်ဖြင့် အတည်ပြု၍ပေးပို့ လာသော ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို တတိယ အကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်သွင်းထားသည့် ပြင်ဆင်ချက်အဆိုများကို ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့်လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ကိုးကား - Yangon Media Group ဖေစ့်ဘုတ် စာမျက်နှာမှ
ဓာတ်ပုံ - Yangon Media Group ဖေစ့်ဘုတ် စာမျက်နှာမှ
ထိုင်းတွင် လှေတစ်စင်း တံတားကို ဝင်တိုက်မိပြီး နစ်မြုပ်၊ ခရီးသည် ၁၈ ဦးသေဆုံး၊ ၁၂ ဦး ပျောက်ဆုံး
အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး ဝန်ထမ်းများ ရေနစ်နေသူများကို ကယ်ဆယ်နေစဉ်
စက်တင်ဘာ ၂၀ ဘန်ကောက်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ခရီးသည်တင် လှေတစ်စင်းက စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကွန်ကရစ်တံတားတိုင်ကို ဝင်တိုက်မိပြီး နစ်မြုပ်ခဲ့သောကြောင့် လူ ၁၈ ဦးရေနစ်သေဆုံးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ လှေပေါ်တွင် ခရီးသည် ၁ဝဝ ခန့် လိုက်ပါလာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ၁၂ ဦးမှာပျောက်နေဆဲဟုဆိုသည်။ ဘန်ကောက်မြို့၏ မြောက် ဘက်မိုင် ၅ဝ အကွာ အယုဒ္ဓယမြို့ အနီးကျောက်ဖုရားမြစ်ထဲတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားလှေတစ် စင်းနှင့်မတိုက်မိစေရန် တိမ်းရှောင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ကွန်ကရစ်တံတားတိုင်လုံးကို ဝင်တိုက်မိခဲ့ရသည်။
ထိုင်းအစိုးရ အရေးပေါ်ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများက အလျင်အမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီး မြစ်ထဲတွင် ရေနစ်နေသူများကိုဆယ်ယူကယ်တင်ပေးခဲ့ရသည်။ ရေနစ် နေသူများထံ ကြိုးများပစ်ပေးကာ ကမ်းပေါ်ဆွဲ တင်ခဲ့ကြရသည်။ ရေမွန်းနေသူများကို ရှေးဦးသူနာပြု နည်းလမ်းများဖြင့် ကုသပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ဒေသတွင်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ချမ်းသာသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းမှ ဝင် ငွေများစွာရရှိသည်။ သို့သော်ထိုင်း နိုင်ငံ၏ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများတွင် မတော်တဆဖြစ်ရပ်များ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် အစိုးရ၏ကြပ်မတ်လုပ်ဆောင်မှုများမှာ အားနည်းလှသည်။
ဘန်ကောက်မြို့ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသော ကျောက်ဖုရားမြစ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေးတွင်အဓိကကျပြီးအသုံးဝင်သည်။ သို့သော်လူအပြည့်အကျပ်တင်ထားသော လှေများသည်အန္တရာယ်ဖြစ်လော က်သော အမြန်နှုန်းဖြင့် ထိုမြစ်ထဲမှ ခုတ် မောင်းလေ့ရှိသည်။
ဘာသာပြန် - Yangon Media Group
အန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီ ဘရတ်ပစ်ကို ကွာရှင်းခွင့်တောင်း
ဂျိုလီနဲ့ ပစ်ကို အတူတကွတွေ့ရစဉ်
စက်တင်ဘာ ၂၁ နယူးယောက်
ဂျိုလီရဲ့ ရှေ့နေကတော့ "ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မိသားစုအတွက်အရေးကြီးလို့ ချမှတ်လိုက်ရတာပါ" လို့ ပြောပါတယ်။ ဂျိုလီနဲ့ ဘရတ်ပစ်ဟာ ၂ နှစ်နီးပါးတိုင်အောင် လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုလီဟာ ဘရတ်ပစ်နဲ့ ကွာရှင်းဖို့အတွက် တရားရုံးမှာ လျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ သူ့ရဲ့ ရှေ့နေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဂျိုလီနဲ့ ဘရတ်ပစ်ကတော့ ညှိလို့မရတော့တဲ့ အထိဖြစ်လာလို့ ကွာရှင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ ပြောကြားပါတယ်။ ဂျိုလီတို့ စုံတွဲဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တွဲလာခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၄ မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုလီဟာ သူတို့ရဲ့ ကလေး ၆ ယောက်လုံးအတွက် မိဘအုပ်ထိန်းခွင့်ကိုတောင်းဆိုထားပြီး ဘရတ်ပစ်ကိုတော့ လာကြည့်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး သူမဟာ ကွာရှင်းပြီးနောက် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး ကွာရှင်းတာဟာ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ကပါ။ People magazine နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာတော့ ပစ်က "ကျွန်တော် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရမ်းကို ဝမ်းနည်းရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကလေးတွေပါ။ ကျွန်တော့်ကလေးတွေကို နည်းနည်း လွတ်လပ်ခွင့်ကလေးပေးလိုက်ပါလို့ ကျွန်တော် မီဒီယာတွေကို တောင်းဆိုပါရစေ"
Mr and Mrs Smith ကားရိုက်တာကနေပြီး စတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲဟာ ၂၀၁၆မှာတော့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကိုးကား - The Guardian ဓာတ်ပုံ - Valerie Macon/AFP/Getty Images
မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ကူညီသူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားကို ထိုင်းတရားရုံး ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေး
လူ့အခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူ Andy Hall
ထိုင်းနိုင်ငံက လူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူလည်းဖြစ် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အပါအဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား Andy Hall ကိုထိုင်းတောင်ပိုင်းက(Natural Fruit Co Ltd) သစ်သီးစက်ရုံက အသရေဖျက်မူနဲ့အီလက်ထရောနစ် မှုတွေနဲ့ တရားစွဲခဲ့တဲ့အမူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးနေရာကနေ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေမှာတော့ထောင်ဒဏ် ၄နှစ်နဲ့ ငွေဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင်ရေးလှုပ်ရှားသူ လည်းဖြစ် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ အပါအဝင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား Andy Hall ကို ဘန်ကောက်မြို့က တောင်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးကနေ ထောင်ဒဏ် ၄နှစ်နဲ့ ငွေဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် လို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်ရေးကွန်ယက်ရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဌေးက အခုလိုပြောပါတယ်။
“သစ်သီးစက်ရုံကနေပြီးတော့ တရားစွဲထားတဲ့ အီလက်ထရောနစ် ပုဒ်မနဲ့ အသရေဖျက်မှု တရားရုံးကနေပြီးတော့ ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်ဆိုပြီးတော့ ထောင်ဒဏ် ၄နှစ်နဲ့ ဒဏ်ငွေက ဘက် ၂ သိန်း ချလိုက်တယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် သူကတရားရုံးမှာ ထွက်ချက်ပေးတုန်းက တရားစီရင်မှု ကို အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ ၄ ပုံ ၁ ပုံလျှော့တယ်ဆိုတော့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်နဲ့ ဘက်ငွေ ၁ သိန်း ။ အဲဒီမှာ ထောင်ဒဏ်ကို အရင်က ပြစ်မှုမရှိခဲ့တာရော၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူအဖြစ် လူ့မှုအသိုင်းအဝိုင်းအကျိုးစီးပွားလုပ်တာကြောင့် ဆိုင်းငံ့ ၂ နှစ် အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဒီ ၂ နှစ် ကာလအတွင်းမှာ နောက်ထပ်အမှုတွေဘာတွေစွဲပြီးတော့ ပြစ်ဒဏ်ချခံရတာမျိုးမရှိရင်တော့ သူထောင်ဒဏ်ကျခံစရာမရှိဘူး။ ဒီ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ နောက်ထပ်အမှုတွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချခံရတာမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ ခဏက ကျတဲ့ ၃ နှစ်နဲ့ပေါင်းပြီး ကျခံရမယ်။”
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူအခွင့်အရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်ရေး ကွန်ယက်က နိုင်ငံခြားရေးရာ ဆိုင်ရာအကြံပေး အဖြစ် တာဝန်ရှိသူဖြစ်တဲ့ Andy Hall ဟာလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထိုင်းတောင်ပိုင်းက သစ်သီးစက်ရုံကအလုပ်သမားတွေရဲ့ အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Finland နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုကို သုတေသန စစ်တမ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ပေးပိုခဲ့တာကြောင့် သစ်သီးစက်ရုံရဲ့ တရားစွဲဆိုတာကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လိုလည်း ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“Andy Hall ကစက်ရုံမှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကို စစ်တမ်းတခုလုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကို Finland က Finnwatch ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကို ပို့ပေးတယ်။ ပို့ပေးတာကို Finnwatch ကလည်း ဒီဟာကို အင်တာနက်ပေါ်တင်တာပေါ့နော် စက်ရုံမှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေ ။ အဲဒါကြောင့် ဒီလိုလုပ်လိုက်တာက သူ့တို့ကို ထိခိုက်နစ်နာတယ်ဆိုပြီးတော့ တရားဆွဲတယ်။”
Andy Hall ဟာ ထိုင်းတရားရုံးမှာနောက်ထပ်တရားမမှု ၂ ခုကို ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး သစ်သီးစက်ရုံ က ဘတ်ငွေ သန်းနဲ့ချီပြီး နစ်နာကြေး တောင်းဆိုထားတယ် လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်း က သစ်သီးစက်ရုံက စွဲဆိုထားတဲ့အမူနဲ့ ပတ်သက်လို့အကြိမ်ကြိမ်တရားရုံးက စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ သူ့ကိုအပြီးသတ် အမိန်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူအမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အယူခံတက်ပြီး ဆက်လက် အမူရင်ဆိုင်သွား မှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်ရေး ကွန်ယက်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကိုးကား - မအေးအေးမာ / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
ဓာတ်ပုံ - မအေးအေးမာ / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင် ပိုင်ရှင်ကို ဖမ်းမိ
စက်တင်ဘာ ၂၀ ရန်ကုန်
ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် အိမ်အကူမိန်းကလေးငယ်များအား ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ပြီး လုပ်ခလစာများမပေးခဲ့သည့် အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်တင်သူဇာကို ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၂ဝရက် ည ၉နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင် ဖမ်းမိပြီဟု သိရသည်။
၎င်းအမှုကို ကျောက်တံတားမြို့ရဲစခန်းတွင် (ပ)၁၉၃/၂၀၁၆၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၄/၃၂ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီး ရမိရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက လိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှစ်ဦးအနက် ဒေါ်တင်သူဇာ (၅၇)နှစ်အား ၎င်း၏အဒေါ်ဖြစ်သူနေထိုင်သော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ပြည်တော်သာလမ်းရှိနေအိမ်မှ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်သည်။
ကျန်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ မစုမွန်လတ်အား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကိုးကား - Yangon Police ဖေစ့်ဘုတ် စာမျက်နှာမှ
ဓာတ်ပုံ - Yangon Police ဖေစ့်ဘုတ် စာမျက်နှာမှ
အစွန်းရောက်အမြင်တွေကြောင့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းဟု တရုတ်သတင်းစာ ရေးသား
စက်တင်ဘာ ၁၉ ရန်ကုန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပေါ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာရတာဟာ အစွန်းရောက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ မီဒီယာတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေကို ထင်ဟပ်လေ့ရှိတဲ့ တရုတ်သတင်းစာတစောင်ရဲ့ ရေးသားဖော်ပြမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတိထားဖို့လိုတယ်လို့ တရုတ်- မြန်မာ ဆက်ဆံရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ တဦးက သုံးသပ်ပါတယ်။ အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဒေသစီမံကိန်းများ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်အနေနဲ့ မြစ်ဆုံဒေသကို သွားရောက်လေ့လာ ခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ အခုလို ရေးသားချက်မျိုး ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ သတင်းအပြည့်အစုံ ကိုတော့ ဗွီအို အေ သတင်းထောက် မမြင့်မြင့်ခိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေကို မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ ဗဟိုပါတီကျောင်းက ထုတ် ဝေတဲ့ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ ထုတ် သတင်းစာမှာ မြန်မာပြည်သူတွေကြား မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာအောင် အစွန်းရောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အ စွန်း ရောက်တဲ့ မီဒီယာတွေက လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲဖော်ပြထားပါတယ်။
The Study Times လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ဗဟိုပါတီကျောင်းက ပိုင်တဲ့ သတင်းစာဟာ တရုတ်အစိုး ရရဲ့ မူဝါဒတွေကို ထင်ဟပ်လေ့ရှိတာမို့ ဒီရေးသားဖော်ပြမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတိထားဖို့တော့ လိုမယ်လို့ တရုတ်- မြန်မာ ဆက်ဆံရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်သူ ဒေါက်တာ လှကျော်ဇောက ပြောပါတယ်။
“ဗဟိုကျောင်းလို့ခေါ်တယ် အဲဒါကတော့နည်းနည်း ဩဇာကြီးတာပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗဟိုကော်မတီတွေအတွက် အထူးဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်း ကထုတ်တာဖြစ်တော့ ယေဘုယျအားဖြင့် အစိုးရကို ပေါ်လာစီတွေအကြံပေးနေတဲ့ ဌာနတွေဘာတွေလည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီက အကြံပေးချက်တွေဘာတွေလည်းရှိတော့ တချို့ကတော့ ဒီလိုတောင်ပြောတယ် အဲဒီဗဟိုကျောင်းကထွက်လာတဲ့ ညွန်ကြားချက်တွေဟာ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီဖြစ်ဖို့ လမ်းများတယ်လို့ တချို့ကပြောတယ်။ ဗဟိုကျောင်းဆိုတာက အစိုးရနားကို ပေါက်တဲ့ကျောင်းဖြစ်တာကို ၊ အာဘော်တွေဖြစ်တာကိုအဲဒီတော့ သတိတော့ထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဖိအားပေး တာခံနေရသလို မြန်မာပြည်က မီဒီယာတချို့ရဲ့ အစွန်းရောက်တဲ့ ရေးသားပြောဆိုမှုတွေကြောင့် တရုတ်- မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်မယ့် စီမံကိန်းတွေကို ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်စေတယ်လို့ လည်း တရုတ်ဗဟိုပါတီကျောင်းပိုင် သတင်းစာက ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီစွပ်စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ စိမ်းလန်းအမိမြေအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမျိုးသူကတော့ ဘယ်အချက်ကို ကြည့်ပြီး အစွန်းရောက်တယ်ဆိုတာ စွပ်စွဲသလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
“အဲဒီတော့ တရုတ်နိုင်ငံကတော့ စွပ်စွဲတာကတော့ သူတို့ကတော့ စွပ်စွဲနေကြပဲလေ။ အဲဒီတော့ ဘယ်အချက်အလက်ပေါ်မှာမှုတည်ပြီး စွပ်စွဲတာလဲ ၊ ဘက်အချက်အလက်ကိုပြောတာလဲ၊ လူထုကမကြိုက်လို့ပြောတာကို သူတို့ကအစွန်းရောက်တယ်ဆိုတော့ အစွန်းရောက်တယ်ဆိုတာက ဘာလုပ်တာလဲ၊ အစွန်းရောက်တယ်ဆိုတာက ဘာတွေများဖြစ်တာလဲ အဲဒါတွေတော့ သိချင်ပါတယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရအနေနဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရုတ်- မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် အဖြေတခုရှာဖို့ ဆန္ဒရှိသလို လက်ရှိမှာတော့ မြစ်ဆုံ ကော်မရှင်အနေနဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်နေပြီး သမ္မတထံ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ အစီရင်ခံစာတင် သွင်းဖို့ ရှိပါတယ်။
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း လေ့လာစိစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားမှု အပါအဝင် တရုတ်- မြန်မာနှစ်နိုင်ငံရဲ့ စဉ်းစားချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အားလုံးလက်ခံနိုင်လောက် တဲ့ အဖြေတခု ထုတ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဒေါက်တာလှကျော်ဇောက ပြောပါတယ်။
“တကယ့်ကို သိပ္ပံနည်းကျ စဉ်းစားပြီးတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့လိုအပ်မှုရော ၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ ခံစားမှုရော၊ အကုန် တရုတ်ပြည်ရဲ့ နစ်နာချက်တွေရော ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့လိုအပ်မှုရော အားလုံး ခြုံပြီးတော့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ အဖြေတခုရမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။”
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ကော်မရှင်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေကို အစီရင်ခံစာတင်သွင်းတာလောက်ပဲရှိပြီး ပြတ်သားတဲ့ အဖြေတခုကို သုံးသပ်ပေးပါ့မလားဆိုတာ သံသယရှိတယ်လို့ ဦးဝင်းမျိုးသူက သူ့အမြင်ကို အခုလို ပါတယ်။
“လက်ရှိကော်မရှင်ကတော့ သူတို့မကြိုက်ရင် မကြိုက်တဲ့ သူတို့ရတဲ့အချက်အလက်ကိုပဲ သူတို့က ဒီအတိုင်းပြည်လည်ဖော်ပြပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလောက်ပဲ ရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့ ခန့်မှန်းတယ်။ ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပါ့မလားဆိုတာလည်း ဆရာ့အနေနဲ့ကတော့ သံသယရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဟိုဘက် ဒီဘက်ပေါ့ ၂ ဖက် ဆည်ဆောက်ချင်တဲ့လူနဲ့ မဆောက်ချင်တဲ့လူတွေဟာကို စုပြီးတော့ တင်ပြပေးမယ့်သဘောပဲ လို့ နားလည်တယ်။ အဖြေတခုခုကို သုံးသပ်ပြီးတော့ ပေးပါ့မလားတော့ ဆရာ့အနေနဲ့ သံသယဝင်တယ်။”
ဧရာဝတီမြစ်ကို မှီတင်းနေထိုင်သူ တွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၆ ဘီယီယံ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက် ၂၀၁၁မှာ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ NLD သစ် လက်ထက်မှာတော့ တရုတ်အစိုးရဘက်က စီမံကိန်းကို ပြန်စတင်လိုကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကတော့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို အပြီးသတ် ရပ်ဆိုင်းစေလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိတာမို့ လက် ရှိမှာ ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတွေ လုပ်နေတာပါ။ စီမံကိန်းကို အပြီးသတ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ပေးလျော်ရမယ့် အခြေအနေ ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုးကား - VOA News
နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ အထိ တိုင်အောင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သိုလှောင်နိုင်သော ဘက်ထရီ UCI ကျောင်းသား မြလဲ့ထိုင်း မတော်တဆ ဖန်တီးမိ
ဖန်တီးထားသော ဘက်ထရီခဲကို တွေ့ရစဉ်
စက်တင်ဘာ ၂၀ အာဗိုင်း
အခွင့်အလမ်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများက တွေ့ချိန်မှာ ကံကောင်းလာတတ်ပါတယ်လို့ ရှေးလူကြီးများက အဆိုရှိကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်က ပါရဂူဒေါက်တာဘွဲ့ ကျောင်းသူ မြလဲ့ထိုင်း အတွက်တော့ ပိုပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ ဥပမာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ အရာဝတ္ထုများကို စမ်းသပ်နေတုန်း သူဟာ နောက်နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ တိုင်အောင် လျှပ်စစ်သိုလှောင်ထားနိုင်တဲ့ ဘက်ထရီကို မတော်တဆ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လပ်တော့များနဲ့ စမတ်ဖုန်းများကို မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။
LinkedIn ရှိသူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုတွေ့ရစဉ်
ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က သုတေသနပညာရှင်များဟာ ဘက်ထရီမှာ ထည့်သွင်းအ သုံးပြုဖို့ နာနိုဝါယာများကို စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ သေးငယ်တဲ့ ဖျက်ဆီးလွယ်တဲ့ ကြိုးများဟာ ဖြတ်တောက်သွားကြောင်းသိလာရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ တစ်နေ့မှာ မြလဲ့ဟာ သေးငယ်တဲ့ နာနိုရွှေကြိုးများကို မက်ကနီ ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ ပလက်စ်ဆီဂလပ်စ် အလက်တရိုက် ဂျယ်များကို အသုံးပြုပြီး စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာ လပ်တော့များကို အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကြာအောင် အားသွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ အောင်သတင်း Aung News
ကိုးကား - Good
ဓာတ်ပုံ - LinkedIn, Good
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆု ပေးအပ်သည့်အပေါ် ဟားဗတ်အစ္စလာမ္မစ် အသိုင်းအဝန်းကန့်ကွက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးဆုအား လက်ခံရယူနေစဉ်
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရန်ကုန်
၂၀၁၆ ခုနှစ် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးဆုအား ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ဖောင်ဒေးရှင်းက မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခြင်းအပေါ် မွတ်စလင် ကျောင်းသားများနှင့် အဖွဲ့များက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူနည်းစု မွတ်စလင်များအပေါ် နှိပ်စက်မှုများအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း မရှိဟုဆိုကာ ဝေဖန်ကန့်ကွက်ကြသည်။
ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဆုရွေးချယ် ပေးအပ်လိုက်ခြင်းသည် ကျောင်းသား အဖွဲ့အစည်းအတွက် အမှန်အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေသည်ဟု ဟားဗတ်အစ္စလာမ္မစ် အသိုင်းအဝန်း၏ ပြည်ပရေးရာဆက်ဆံရေး ဥက္ကဌဖြစ်သူ အန်ဝါအိုမစ်ရှ်က ပြောကြောင်း ဟားဗတ်ကောလိပ်နေ့စဉ်သတင်းစာ The Crimson တွင် ဖော်ပြသည်။
မွတ်စလင်ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်အတွင်း ဆန္ဒပြရန်လည်း စီစဉ်ထားကြောင်း ယင်းသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း လက်တွေ့ဖြစ်လာမည်ကို လက်တလော မသိရသေးပေ။
ဟားဗတ်အသိုင်းအဝန်းမှ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယင်းဆုချီးမြှင့်ခြင်း အလားတူ ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်များအတွက် အကျိုးဆောင် လှုံ့ဆော်ပေးနေသည့် အဖွဲ့တစ်ရပ်ဖြစ်သော Burma Task Force USA အဖွဲ့က ကန့်ကွက်ကြောင်းစာကို ဟားဗတ်ဖောင်ဒေးရှင်သို့ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း အဖွဲ့၏ မီဒီယာဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံဖြစ်သူ ဂျင်နီဖာဆာဝစ်ဇ်က ပြောကြောင်း The Crimson တွင် ဖော်ပြသည်။
“ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ရှုပ်ထွေးသည့် အမှန်တရားထက် မျက်မြင်အပေါ်မှာသာ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း” အဆိုပါ ပေးပို့သည့် စာတွင် ရေးသားထားသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“မှန်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လေးစားစရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဆုက ဒီမိုကရေစီဆုမဟုတ်ဘူး။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆုဖြစ်တယ်။”ဟု ဆာဝစ်ဇ်က ပြောခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ - မဇ္စိုမ
Apple က iOS 10 အတွက် iMessage App Store ကိုဖြန့်ချိ
iMessage App Store ကိုတွေ့ရစဉ်
Apple ကုမ္ပဏီဟာ iOS 10 ကို ဖြန့်ချိပြီး နောက်ပိုင်းမှာ iMessage App Store ကို ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့ App Store မှာ နောက်ဆုံးထွက် iOS 10 ကို ထောက်ပံပေးနိုင်တဲ့ App အနည်းငယ်ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ App Store ကိုတော့ iOS 10 ကို install လုပ်ထားတဲ့ လူအနည်းငယ်သာ သုံးစွဲနိုင်ပါသေးတယ်။ iOS 10 ကို update လုပ်ထားတဲ့ လူတွေအတွက် သတင်းကောင်း တစ်ခုကတော့ Evernote, email by EasilyDo, OpenTable, Yelp, JibJab, Words with Friends, Square Cash, The Weather Channel နဲ့ GIF keyboard တွေဟာ iOS 10 အတွက် update များကို လုပ်ထားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Nintento ကလည်း iMessage အတွက် တရားဝင် Super Mario Run Stickers များကို ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။
ကိုးကား - VentureBeat
ဓာတ်ပုံ - Ken Yeung (VentureBeat)
ခန္တီး မြို့တွင် ရေမဆေးကျောက်ရှာပြီး ပြန်လာသူအချို့ ဖမ်းဆီးခံရ
တာဝန်ရှိသူများ စက်လှေပေါ်တွင် စစ်ဆေးနေပုံ
စက်တင်ဘာ ၁၇ ခန္တီး
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ခန္တီးဆိပ်ကမ်း၌ နန်စီပွန်ကျောက်စိမ်း မှော်မှထွက်သော စက်လှေတွင်လိုက်ပါလာသည့် ရေမဆေးကျောက်ရှာပြီး ပြန်လာသူ ၈ ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ကျောက်မျက်ဌာန အပါအဝင် ပူးပေါင်းအဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ၎င်းတို့ထံမှ ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံးအချို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပြီး တည်ဆဲကျောက်မျက်ဥပဒေအရ အမှုဖွင့်သွားမည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
ခန္တီးမြို့နယ် နန်စီပွန်ကျောက်စိမ်းမှော်တွင် ရေမဆေးရှာသူများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များကြား တင်းမာမှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီး အပြန်အလှန် စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုများရှိခဲ့ကာ တိုင်းအစိုးရ ဝန်ကြီးတစ်ဦးအပါအဝင် တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း ပြေလည်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ လွန်ခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းတွင်လည်း ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအနီး ကားလမ်းတွင် လက်လုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ကာ လူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။
မကြာမီက တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဦးသန်းဌေးအပါအဝင် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများ နန်စီပွန်မှော်သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြဿနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ "ရေမဆေးသမားများကို ထိန်းချုပ်ရုံနှင့် မပြီးသေးဘဲ ရေမဆေးသမားများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေးကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မျှမျှတတစဉ်းစားပေးမှ ပြဿနာ ပြေလည်မည်ဖြစ်သည်"ဟု ပြောကြောင်း ELEVEN Media တွင် ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ပြဿနာအား အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေသည့် ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသတွင် ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမှုမပြုဘဲ ရေမဆေးသမားများကို အခြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း မရှိမီ အခင်းဖြစ်ပွားရာမဟုတ်သည့်နေရာ၌ တည်ဆဲဥပဒေကို အကြောင်းပြကာ ယခုကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးခြင်းမှာ မသင့်လျော်ကြောင်း၊ ဒေသခံများ လက်လုပ်လက်စားများကို ဖိနှိပ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်နေကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်သည့်နေရာတွင် အမှန်တကယ် အထောက်အထားရှိသည့်လုပ်ကွက်နေရာတွင်ကျူးကျော်ရှာဖွေသူများကိုသာ အရေးယူသင့်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ဖမ်းဆီးခြင်းက ပြဿနာကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်ကြောင်း၊ ဒေသ၏တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်လာမည်ကိုလည်းစိုးရိမ်ကြကြောင်း ဒေသနေပြည်သူအများက ပြောဆိုဝေဖန်နေကြပါသည်။
ကိုးကား - သတင်းပေါင်းစုံ ဖေစ့်ဘုတ် စာမျက်နှာမှ
ဓာတ်ပုံ - သတင်းပေါင်းစုံ ဖေစ့်ဘုတ် စာမျက်နှာမှ
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင် ၃၅ လမ်းတွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် အနူကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွား
တရားခံအား ရဲကားဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားစဉ်
ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ၃၅ လမ်းအလယ်ဘလောက်ရှိ တိုက်အမှတ် ၁၇၂ - ၄ လွှာရှိ နေအိမ်သို့ ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ ၁၂ နာရီဝန်းကျင်က နေအိမ်ပေါ်တက်ခါ အနုကြမ်းစီးမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှ ရသည်။
"ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အသေးစိတ်မသိရသေးဘူး။ နေအိမ်မှာကသားအမိနှစ်ယောက်တည်းနေတာလို့သိရတယ်။ အဘွားကြီး ကတော်တော်အသက်ကြီးနေပြီ။ အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့သူက လူငယ်ပဲ။ တံခါးလည်းသူတို့ ဖွင့်ပေးတာလို့ သိရတယ်။ အဘွားကြီးတော့ ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင် အကူအညီတောင်းတော့ ဒီလူ နောက်ဖေးလမ်းကြားဖက်ကို ထွက်သွား လမ်းထဲကလူတွေဝိုင်းဖမ်းတာမိသွားတယ်။အိမ်ပေါ်တက်တဲ့ လူကော၊အဘွားကိုရော ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆေးရုံခေါ်သွားတယ်" ဟု ကျောက်တံတားမြို့နယ် အမှတ် (၁)တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကြည်ပြာကပြောသည်။
တရားခံအား ကားပေါ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားစဉ်
ကိုးကား - လင်းလင်းအောင် (News Watch)
ဓာတ်ပုံ - News Watch
ဒေါ်စုရောက်နေသည့် နယူးယောက်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ ဒေါ်စုကို အထူးလုံခြုံရေးဖြင့် စောင့်ရှောက်နေ
စက်တင်ဘာ ၁၇ နယူးယောက်
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်ရှိကာ ကုလသမဂ္ဂ အ​ထွေ​ထွေညီလာခံ ကျင်​းပမယ်​့အချိန်​ ​စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် နှောင်းပိုင်းက နယူးယောက်မြို့တွင် ဗုံပေါက်​ကွဲမှု ဖြစ်​ပွားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုံခြုံရေးအတွက် US Secret Service က လုံခြုံ​ရေး အထူး တာဝန်​ယူထားပြီး ​စောင်​့​ရှောက်​နေကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ၎င်း၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
"အန္တရာယ်​ ကင်​းရှင်​းပါတယ်​။ US Secret Service က လုံခြုံ​ရေး အထူး တာဝန်​ယူထားပြီး ​စောင်​့​ရှောက်​​နေပါတယ်​။" ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ရှိ ချယ်စီးအရပ်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်က ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၂၉ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
ဒဏ်ရာရသူများမှာ အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရကြောင်း မီးသတ်ဌာနက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ မြန်မာအများစု ဝင်ခွင့်မရ
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ နယူးယောက်မြို့ရှိ မြန်မာအသိုက်အဝန်းတို့ တွေ့ဆုံစဉ်
စက်တင်ဘာ ၁၈ နယူးယောက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ စနေနေ့ မနက်က နယူးယောက်မြို့က မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးမှာ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဆရာဝန်တစ်ဦးက ဆေးကုသခွင့်လက်မှတ်တွေ ပြန်လည်ရရှိရေး၊ မြန်မာပြည်သူတွေ ဆေးဝါးအစစ်အမှန်တွေ ရရှိရေး အပါအဝင် အမေရိကန်ရောက် မြန်မာဆရာဝန်တွေ အမိနိုင်ငံပြန်ပြီး တိုင်းပြည်လူထုကို ကူညီဖို့အတွက် အကြံပေးတင်ပြခဲ့ရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနုမြူစွမ်းအင်အသုံးပြုရေးအတွက် တင်ပြခဲ့သလို အဲ့ဒီအခမ်းအနားကို ကနေဒါကလာရောက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပညာရှင်တစ်ဦးက ကိုဖီ အာနန် ဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကော်မရှင်ကို ထောက်ခံကြောင်း ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေကို နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ လိုကြောင်း အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ မြန်မာပြည်ပြန်လိုတဲ့သူတွေကို ဗီဇာထုတ်ပေးရေးအတွက် နိုင်ငံရေးလုပ်မှာ မဟုတ်ကြောင်း သံရုံးက ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတဲ့ အချက်ဟာ မှားယွင်းနေကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ယူနီဆက်အရာရှိဟောင်း ဦးခင်ဇော်က RFA ကိုပြောပါတယ်။
"အဲ့ဒီတော့ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူက ဗီဇာမရဘူးဆိုရင် ကျမတို့လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်တာပဲတဲ့၊ ခံဝန်ချက်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ဆိုတာ သဘာဝမကျဘူးလို့ ထင်တယ်တဲ့"
မြန်မာကုန်သည်ကြီးများ အသင်းဝင်တစ်ဦးက သူတို့မြန်မာပြည်မှာ ဟိုတယ်ဆောက်ဖို့ မြေကွက်လိုချင်ကြောင်း ပြောဆိုရာမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဲ့ဒီကိစ္စ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့က အခမ်းအနားကို လူ ၅ဝ ခန့်သာ သီးသန့်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အတွက် လူဦးရေ ရာနဲ့ချီပြီး ဝင်ခွင့်မရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံး ပြင်ပကပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နှုတ်ဆက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒါဟာ လူတန်းစားခွဲခြားရာ ကျတဲ့အတွက် နောင်မှာ အလားတူထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကိုးကား - RFA Burmese ဖေစ့်ဘုတ် စာမျက်နှာမှ
ဓာတ်ပုံ - မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၊ နယူးယောက်မြို့
iPhone7ကို Apple တရားဝင် မိတ်ဆက်
စက်တင်ဘာ ၇ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ Apple ဟာ iPhone7နဲ့7Plus တို့ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ iPhone မျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်တဲ့ i...
iMessage App Store ကိုတွေ့ရစဉ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရန်ကုန် Apple ကုမ္ပဏီဟာ iOS 10 ကို ဖြန့်ချိပြီး နောက်ပိုင်းမှာ iMessage App Store ကို ဖြန့်...
ကာတွန်း - အောင်သတင်း (Aung News) www.aungnews.com www.facebook.com/aungnews
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ နယူးယောက်မြို့ရှိ မြန်မာအသိုက်အဝန်းတို့ တွေ့ဆုံစဉ် စက်တင်ဘာ ၁၈ နယူးယောက...
ဖန်တီးထားသော ဘက်ထရီခဲကို တွေ့ရစဉ် စက်တင်ဘာ ၂၀ အာဗိုင်း အခွင့်အလမ်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများက တွေ့ချိန်မှာ ကံကောင်းလာတတ်ပါတယ်လို့ ရှေးလ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ကိုတွေ့ရစဉ် စက်တင်ဘာ ၂၀ နေပြည်တော် လွှတ် တော်အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန်နောက်ကျသည့် ကို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးဆုအား လက်ခံရယူနေစဉ် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရန်ကုန် ၂၀၁၆ ခုနှစ် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးဆုအား ဟားဗ...
Venice ရုပ်ရှင်ပွဲတော်က မော်ဒယ်နှစ်ဦးရဲ. လုံလုံခြုံခြုံ အဝတ်အစားပေမယ့် တစ်ကိုယ်လုံးကို မြင်နေရစေတဲ့ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းဆန်း
စက်တင်ဘာ ၅ ဗင်းနစ် ပွဲတက်လာသူတွေအားလုံးရဲ. မျက်လုံးတွေက သူတို့ဆီကို ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ဘာမှမဝတ်ထားဘူးလို့တောင် ထင်ရလောက်ပါတ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုတွေ့ရစဉ် စက်တင်ဘာ ၁၇ နယူးယောက် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်ရှိကာ ကုလသမဂ္ဂ အ​ထွေ​ထွ...
ကာတွန်း - အောင်သတင်း (Aung News) www.aungnews.com www.facebook.com/aungnews ကြော်ငြာ
© 2016 Copyright အောင်သတင်း